ကွင်းလယ်လူပေ့ါဘာကို ဖိအားပေးလိုက်တဲ့ နည်းပြ မော်ရင်ဟို
နိုင်ငံအသင်းက ခြေစွမ်းအတိုင်း ကလပ်မှာလည်း ဆက်ပြသဖို့ Pogba ကို တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့ Mourinho
24 Jul 2018 . 6:57 PM
မန်ယူ Manchester United အသင်းနည်းပြ မော်ရင်ဟို Mourinho က ကွင်းလယ်လူ ပေ့ါဘာ Pogba အနေနဲ့ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ပြင်သစ်အသင်းအတွက် ခြေစွမ်းပြကစားခဲ့သလို ကလပ်အသင်းမှာလည်း ဒီခြေစွမ်းကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့ တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်။ ပေါ့ဘာဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတုန်းက ပြင်သစ်အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်မှာ အကောင်းဆုံးပါဝင်ကစားခဲ့ပြီး အသင်းနဲ့အတူ ချန်ပီယံဆုဖလားကိုလည်း ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တယ်။ ပေါ့ဘာအနေနဲ့ (၄-၃-၃)ကစားကွက်မှာ ကွင်းလယ်ဘယ်ဘက်ခြမ်းနေရာကို ကစားရတာ ပိုနှစ်သက်ပေမယ့် မော်ရင်ဟိုကတော့ ပေါ့ဘာဟာ ကိုယ်ကောင်းဖို့ထက် အသင်းအတွက် ပိုအာရုံစိုက်ဖို့ သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
မော်ရင်ဟိုက”ပေ့ါဘာ ခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့က စီစဉ်ပေးစရာမလိုဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ သူကပဲ အသင်းအတွက် ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ပြန်ပေးရမှာပါ။ ပေါ့ဘာလို ကစားသမားမျိုး ခြေစွမ်းပြနိုင်ဖို့အတွက် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲက အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့ ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲက (၁)လလောက်ပဲ ကြာတာကြောင့် တခြားဘာကိုမှ မတွေးဘဲ ဘောလုံးတစ်ခုတည်းသာ အာရုံစိုက်ခွင့်ရလို့ပါ။ လိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင် ပြိုင်ဘက်အပေါ် မူတည်ပြီး အာရုံစူးစိုက်မှု လျော့နည်းတတ်လို့ပါပဲ”လို့ ပြောကြားခဲ့တယ်။ ပေါ့ဘာနဲ့မော်ရင်ဟိုတို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းက ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ပေါ့ဘာကို ရောင်းချမယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ပေါ့ဘာကတော့ မန်ယူအသင်းမှာပဲ ဆက်ကစားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
နိုငျငံအသငျးက ခွစှေမျးအတိုငျး ကလပျမှာလညျး ဆကျပွသဖို့ Pogba ကို တိုကျတှနျးခဲ့တဲ့ Mourinho
မနျယူ Manchester United အသငျးနညျးပွ မျောရငျဟို Mourinho က ကှငျးလယျလူ ပေ့ါဘာ Pogba အနနေဲ့ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ ပွငျသဈအသငျးအတှကျ ခွစှေမျးပွကစားခဲ့သလို ကလပျအသငျးမှာလညျး ဒီခွစှေမျးကို ဆကျလကျထိနျးသိမျးဖို့ တိုကျတှနျးပွောဆိုခဲ့တယျ။ ပေါ့ဘာဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲတုနျးက ပွငျသဈအသငျးရဲ့ကှငျးလယျမှာ အကောငျးဆုံးပါဝငျကစားခဲ့ပွီး အသငျးနဲ့အတူ ခနျြပီယံဆုဖလားကိုလညျး ဆှတျခူးနိုငျခဲ့တယျ။ ပေါ့ဘာအနနေဲ့ (၄-၃-၃)ကစားကှကျမှာ ကှငျးလယျဘယျဘကျခွမျးနရောကို ကစားရတာ ပိုနှဈသကျပမေယျ့ မျောရငျဟိုကတော့ ပေါ့ဘာဟာ ကိုယျကောငျးဖို့ထကျ အသငျးအတှကျ ပိုအာရုံစိုကျဖို့ သတိပေးခဲ့ပါတယျ။
မျောရငျဟိုက”ပေ့ါဘာ ခွစှေမျးပွကစားနိုငျဖို့အတှကျ ကြှနျတျောတို့က စီစဉျပေးစရာမလိုဘူးလို့ ထငျပါတယျ။ သူကပဲ အသငျးအတှကျ ကိုယျတတျနိုငျသလောကျ ပွနျပေးရမှာပါ။ ပေါ့ဘာလို ကစားသမားမြိုး ခွစှေမျးပွနိုငျဖို့အတှကျ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲက အသငျ့တျောဆုံးဖွဈမယျလို့ ကြှနျတျောယူဆပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲက (၁)လလောကျပဲ ကွာတာကွောငျ့ တခွားဘာကိုမှ မတှေးဘဲ ဘောလုံးတဈခုတညျးသာ အာရုံစိုကျခှငျ့ရလို့ပါ။ လိဂျပွိုငျပှဲမှာဆိုရငျ ပွိုငျဘကျအပျေါ မူတညျပွီး အာရုံစူးစိုကျမှု လြော့နညျးတတျလို့ပါပဲ”လို့ ပွောကွားခဲ့တယျ။ ပေါ့ဘာနဲ့မျောရငျဟိုတို့ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီတုနျးက ပဋိပက်ခတှဖွေဈပှားခဲ့ပွီး ပေါ့ဘာကို ရောငျးခမြယျလို့ သတငျးတှထှေကျခဲ့ပမေယျ့လညျး ပေါ့ဘာကတော့ မနျယူအသငျးမှာပဲ ဆကျကစားဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့ပါတယျ။
၀က်ဖို့ဒ်ကွင်းမှာ ရုန်းကန်ရဖို့ရှိနေတဲ့ အာဆင်နယ်
by Naing Linn . 58 mins ago
by Ko Kyue .2hours ago
စီးရီးအေပွဲစဉ်(၃)မှာ ဖီအိုရင်တီးနားနဲ့ သရေကျခဲ့တဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်
by Ko Kyue .9hours ago
ဗလင်စီယာကို အိမ်ကွင်းမှာ အခက်အခဲမရှိ အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာ
by Ko Kyue . 17 hours ago
စိတ်ပျက်စရာ ခံစစ်ကြောင့် နောဝစ်ခ်ျကို အရှုံးပေးခဲ့ရတဲ့ မန်စီးတီး
by Naing Linn . 19 hours ago
၀ုလ်ဗ်နဲ့ပွဲမှာ ဟက်ထရစ်သွင်းပြီး စံချိန်မှတ်တမ်းကောင်းတွေ ရယူခဲ့တဲ့ Tammy Abraham